#MeTooSebat (SebatKoaAho): Ny Media Sosialy No Alain’ireo Kirgyzstan Mba Hiadiana Hevitra Mikasika An’ireo “Sekoly Gulen” Miteraka Resabe · Global Voices teny Malagasy
Tenifototra #MeTooSebat nataon'ireo mpianatra hitantarana ny tantaran'ireo mpampianatra
Voadika ny 13 Marsa 2019 5:23 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Français, Italiano, Español, English
Lisea Aitmatov Kyrgyz-Turkish ho an'ireo tovolahy ao Bishkek (Sary: Lisea Chingiz Aitmatov Kyrgyz-Turkish). Asongadina eo amin'ny Eurasianet.
Nivoaka teo amin'ny Twitter tao Kyrgyzstan ny tenifototra #MeTooSebat nataon'ireo mpianatra fahiny tao amin'ilay sekoly tsy miankina voasarik'ilay manampahaizana tiorka, Fethullah Gulen, mahabe resaka, mba hitantarana ny tantaran'ireo mpampianatra lozabe sy manao fampitahorana manara-drafitra, raha toa ireo hafa kosa miaro ny lazan'ny sekoly amin'ny lafiny fahombiazana ara-akademika.
Misy loko jeopolitika ilay tenifototra satria ny filoham-pirenena Tiorka Recep Tayyip Erdogan dia nanao tsindry tamin'ilay mpiaradia kely amin'i Ankara ao Azia Afovoany – sy ireo governemanta hafa avy any ivelany – mba hanakatonany an'ireo toeram-pampianarana rehetra misy fifandraisany amin'ny Gulen, fahavalo mpanindrotsindrona azy.
Nolazain'ny governemanta Tiorka fa hatramin'ny fotoana ela no efa nikasa handrava ny Fanjakana Tiorka avy any amin'ny toerana anaovany sesitany ny tenany, any Etazonia i Gulen, sady atidoha nikotrika ny fanonganam-panjakana tsy tanteraka tao amin'ny firenena tamin'ny taona 2016.
Vokatr'ilay fanonganana tsy nahomby, noteren'ireo diplomaty Tiorka ireo governemanta any ivelany, nanomboka tao Azerbaijan hatrany Angola mba hiroso amin'ny fanakatonana an'ireo sekoly Gulen.
Raha maro ireo mpiaradia amin'i Tiorka no namaly ny antson'i Ankara hanakatona an'ireo sekoly, nikaroka vahaolana fahatelo kosa i Kyrgyzstan sy Kazakhstan, manome alalana azy ireo hijanona saingy hanova ny anaran'izy ireo sy hampitombo ny fanarahamason'ny governemanta an'ireo rafitra fitantanan-dry zareo.
Ao andamosin'ny #MeTooSebat, Kyrgyz iray mpanao lalàna fara-fahakeliiny no efa niantso fanadihadiana lalina mikasika an'ireo sekoly, malaza amin'ny fananany tsiambaratelo, izay mahakivy an'ireo ray amandreny nihevitra azy ireny ho toy ny safidy azo leferina manoloana ny rafitra fampianarana an'ny fanjakana misedra fahasahiranana.